Naliphi na intombazana yanamhlanje kufuneka ibe nekhadi lebhizinisi lakho. Ukuba ufuna ukuba inombolo yakho ingalahlekanga kwaye indoda ayikukhohliwe, kufuneka uyenze, ukuba unayo ikhadi lebhizinesi. Uyayifuna ebomini nakwabahlobo.
Khumbula ukubhala iinombolo kwi-scrap iphepha okanye i-napkins engasetyenziswanga kwaye ayifanelekanga. Ukuba unekhadi lomashishini, loo mntu akayi kuwulahleka, kwaye umculi wakho, xa uthe wafunyanwa, akayi kumthinta, njengoko uya kucinga ukuba le yimeko. Khumbula, akusiyo yonke intombazana enika ikhadi lebhizinisi kwaye yintoni indoda engayi kukulibala.
Ewe, ukuba uhleli, kwaye indoda yakho ayikubizanga oko, zibiza wena. Mhlawumbi wayemangaliswe gqitha kangangokuthi akazange alinde ukukubiza. Shayela uze uthi le nto yintombazana eyashiye ikhadi lakhe ishishini. Yaye uzive ukhululekile ukuba umemele kuqala ukuba adle. Xa udibana, tshela uvuyiswa kakhulu ukumbona kwakhona kwaye mhlawumbi ikhadi lakho lebhizinisi liyakushintsha ubomi bakho bonke kwikamva.
Ewe, ukuba uqhelane kakuhle neqela kunye nabahlobo, okokuba, xa udla kwisithuthi okanye kwindawo kawonkewonke, kwaye uyithande kakhulu loo ndoda. Nanku kwakhona uya kuncedwa kwikhadi lakho lomsebenzi, onakho kwisikhwama sakho. Indlela kwaye ujwayelane nomntu oyithandayo uze umshiye ekhadini lakhe lomsebenzi ngenombolo yefowuni. Yithi ke uya kujonga phambili umnxeba wakhe.
Njengoko kwaphawulwa ngabafundi beengqondo, xa umfazi efika kumntu kwaye ngokungalindelekanga ukuba ushiye ikhadi lakhe loshishino ngenombolo yefowuni aze athi, mbuyise, amagama akhe ayenze ngathi anqabile. Ukuba ufunda ngokucacileyo kwaye ngomoya omnye uthetha la mazwi, kholwani mna, uvuyo lwakho aluyi kukudlula.
Kukho esinye isizathu sokuba ufanele ube nekhadi lebhizinisi lomntu. Nantsi into, amadoda amaninzi aphumelele kwaye anamandla, ukufunda amaphephancwadi angamadoda afanelekileyo anethemba lokuba ibhinqa lifuna imali yakhe kuphela. Yaye ukuba yena akabonakali nantoni na.
Ukuze ugweme uluvo olunjalo udinga ikhadi lomashishini. Emva koko, yintoni ikhadi lomashishini? Ukuba nekhadi leshishini ungabonisa kwaye ubonise indoda yakho ukuba ungumfazi okhuselekile kwaye unelisekile ongenanto into ayifuniyo, akayi kubheka ii-freebies kunye nezindlela ezilula. Kholwa, xa uqonda oku, indoda yakho iya kwenza konke okusemandleni ukuhlala uhlala nawe. Yaye enye inkalo yobudlelwane bakho iya kuxhomekeka ngokupheleleyo kuwe. Ukuba ungumfazi okhaliphile ungayigcina kwinqanaba lakho.
Kodwa ufuna kuphela ikhadi lakho lomntu wonke oku. Ngoko kutheni ungawutholi, kuba ngokuqinisekileyo akuyi kukulimaza.
Ugogo ka-ugogo kunye nekotishi yeeshizi
Imifuno kunye neziqhamo ezikhuthaza ukukhula
Inkukhu yenkomo kunye nemifuno
I-Pizza "I-Bouquet of Provence"
Amaphulaphu amnandi: i-hairstyle yomtshato yeenwele eziphakathi